(tonga teto avy amin'ny Repoblika frantsay)
I Frantsa na Repoblika Frantsay (amin'ny teny frantsay: République Française) dia firenena mpikambana amin'ny Vondrona Eoropeana. Any Eoropa andrefana no misy azy. Manana zanatany maromaro i Frantsa, ny ngeza indrindra amin'izy ireo dia i Guyane Française.
Fiavin'ilay anarana hoe FrantsaModifier
Tanonkala ny elysée Archived Martsa 10, 2005 at the Wayback Machine
Tanonkala ny praiministra sy ny governemanta Archived Jiona 15, 2006 at the Wayback Machine
Rakibolana Frantsay-Malagasy Archived Mey 18, 2012 at the Wayback Machine
↑ kopian'ny arisiva. archived from the original on 2009-08-02 Retrieved on 2009-10-17.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Frantsa&oldid=1019442"
Dernière modification le 12 Aogositra 2021, à 00:26
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 00:26 ity pejy ity.